Midowga Yurub oo qorshaynaya inuu dacweeyo shirkadda AstraZeneca | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Midowga Yurub oo qorshaynaya inuu dacweeyo shirkadda AstraZeneca
(Brusells) 23 Maarso 2021 – Ururka Midowga Yurub, ayaa hadda qorsheynaya in uu dacwo ku soo ooggo shirkadda daawooyinka sameeysa ee Astra Zeneca, kaddib markii muddooyinkii ugu dambeeyey ay dhibaatooyin xagga caafimaadka ah kala kulmeen dadyoow badan oo qaatay tallaalka shirkadaasi.
Wadamo badan oo Yurub iyo caalamka kale ah ayaa hadda joojiyey isitcmaalka Tallaalkan ka dib markii dadka qaar uu dhiigooda xunjiroobay, halka qaarna kalena la sheegay in ay u dhinteen.
Waxaa kale oo sharikaddan lagu haystaa inaysan ixtiraamin waajibaadyadii qandaraas ee ay la gashay Midowga Yurub, iyadoo horay ula habsaantay shixnado laga dhowrayey.
Yeelkeede, Afhayeenka Arrimaha Caafimaadka ugu qaybsan Midowga Yurub, Stefan de Keersmaeckers, ayaa sheegay in aan weli go’aan laga gaarin tillaabo sharci ah oo sharikadda laga qaado, balse meesha kamuu saarin arrinta guud ahaan.
Soomaaliya, waxaa ay ka mid tahay dalalka Tallaalkan uu gaaray islamarkaana ay dad badan qaateen, mase jirto warar sheegaya in in lagala kulmay dhibaatooyin caafimaad darro.
Waxaa Diyaariyey: Ikraam Cali Kaar & Maxamed Xaaji
Previous articleKaddib dayradii Midowga Afrika MW Farmaajo waxaa hor yaalla inuu 2 waddo uun mid qaado
Next articleJaamacadda Carabta oo bayaan rasmi ah kasoo saartay xaaladda cakiran ee Somalia (Nuxurka warkeeda)